Hevitra · Novambra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Hevitra · Novambra, 2013
Tantara mikasika ny Hevitra tamin'ny Novambra, 2013
Fomba Fijery Diso Mbola Miraikitra, Fitsarana An-tendrony Misoko Mangina: Endrik'Olona Mainty Ao Amin'ny Boky Tantara An-tsary Breziliana
Amerika Latina 27 Novambra 2013
"Mbola tsy ampy ny fanehoana an-tsary," hoy ilay mpikaroka tamin'i Luis Henrique nilaza momba ny olona manana endrika mainty amin'ny boky tantara an-tsary. Niresadresaka taminy momba ny asany ny Global Voices.
Arzantina Sy Ny Teknolojia Vaovao Fanaraha-maso : Manara-maso Ny Fihetsikao Rehetra
Arzantina 25 Novambra 2013
Tandremo izay jerenao, izay kasihan'ny tànanao, sy ny fomba famindranao -- mety mijery ny governemanta. Hazavain'i Ramiro Alvarez Ugarte ny fomba hanitsakitsahan'ny rafitra fanangonan-drakitra "biométrique" ao Arzantina ny tsiambaratelon'ny olom-pirenena.
Bisikilety: Vahaolana Ho An'ny Arabe Ao Damaskaosy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Novambra 2013
Saripîka anjatony mampiseho ireo Siriana lahy sy vavy mivoy bisikilety no mameno ny tontolon'ny tranonkala. Fantaro ny antony.
Mpanakanto Rosiana Mamantsika Ny Vihiny Teo Amin'ny Kianja Mena
Eoropa Afovoany & Atsinanana 17 Novambra 2013
Artista Rosiana iray mahamenatra no namantsika ny vihiny teo amin'ny rarivato ivelan'ny fasan'i Lénin tao amin'ny Kianja Mena. Ahoana ny fihetsiky ny Rosiana ?
Mitady Hetsika Arahan'Asa Ny Yemenita: TEDxSanaa 2013
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 Novambra 2013
Amin'ny alalan'ny lohahevitra "Actions Matter", manomboka androany ny TedxSanaa. Manaraka akaiky ny hetsika i Noon Arabia .
Adihevitra momba ny Fanavakavaham-bolonkoditra Nanjo Ny Mpanampy Vavy Telo Nandritry ny Halloween Tany Lebanona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Novambra 2013
Mpanao bilaogy Libanona tezitra tamina vehivavy telo niankanjo tahaka ny mainty hoditra mpiasa an-trano, nandritra ny Halloween. Fantaro ato anatin'ity lahatsoratra ity ny antony.
GV Face: Nofinofy Amin'ny Fanovana Momba Ny Fifindra-monina Ao Etazonia
Amerika Avaratra 09 Novambra 2013
Niresaka tamin'ireo mpikatroka sy manampahaizana momba ny hetsika ho an'ny fanovana momba ny fifindra-monina izahay izay mety hisy fiantraikany amin'ireo mpifindra-monina eo amin'ny 11 tapitrisa eo izay tsy manana taratasy ara-dalàna monina ao Etazonia.
Asaina Mandrakitra Ho Lahatsary Ny ‘Fiainany Anaty Andro Iray’ Ny Italiana
Italia 04 Novambra 2013
lahatsary fohy mikasika ny fiainan'izy ireo andavanandro izay hatambatra sy hasongadina miaraka anatinà lahatsary lavabe homena lohateny hoe "Italia ao anatin'ny Andro Iray" [it] havoaka amin'ny faran'ny taona 2014
Lahatsary Mahatsikaiky Ho Setrin'ny ‘Vonoy Daholo Ny Olona Ao Shina”: Shinoa Tsy Mety Maty
Amerika Avaratra 04 Novambra 2013
Ny fomba mendrika indrindra hiatrehana ny fihetsehampo manilikilika dia ny fahazakàna hanihany sy fahafantarana tsara ny anton'ilay fankahalàna